Dagaalo isbadalo gacan ku haynta dhaliyey oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho – SBC
Dagaalo isbadalo gacan ku haynta dhaliyey oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho
Posted by editor on January 20, 2012 Comments
Dagaalo ba’an oo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac ayaa xaley saqdii dhexe & saaka hiirtii waaberi ka qarxay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimada ah, kuwaasi oo dhaliyey in guud ahaan gacan ku haynta gobolka Banaadir ay si buuxda ula wareegaan ciidamada dawlada KMG Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM.
Dagaaladan ayaa waxay ka dhaceen fariisimo ay ku sugnaayeen xoogaga Shabaabka gaar ahaan deegaanada Suuqa Xoolaha, Waxara-Cade, Dayniile, waxaana ay ka dambeeyeen iyadoo guluf dagaal oo culus ay qaadeen ciidamadaasi iskaashanaya.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaqyo ciidan xarumaha ciidaamda dawlada KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyadoo gaadiidka dagaalka oo ay ka mid yihiin taangiyada lagu daabulayey wadada warshadaha iyo furimaha dagaalka magaalada Muqdisho, taasi oo muujinaysa in weerarkan uu ahaa mid qorsheysan oo ay Dawlada KMG & AMISOM ay ku doonayeen inay Muqdisho awoodeeda si buuxda ula wareegaan.
Goobaha kale ee ay ciidamada dawlada & kuwa AMISOM la wareegeen waxaa ka mid ah Qabuuraha Barakat & Jaamacada Muqdisho halkaasi goobo ku dhaw Shabaabku fariisimo ku lahaayeen.
Tan iyo markii xoogaga Shabaabku ay sheegeen inay ka baxeen magaalada Muqdisho gaar ahaan goobihii ay ka dagaalamayeen waxay ku sugnaayeen Suuqa Xoolaha, Dayniile & goobo ka mid ah duleedka Muqdisho.
Laakiin wixii xiligaasi ka dambeeyey waxay Shabaabku wadeen weeraro ku dhufoo ka dhaqaaq ah iyagoo muujinayey inay wali awood u leeyihiin inay ka dagalamaan gudaha magaalada caasimada ah.